"အသိ သတိ များဖြင့် ရင်ဘောင်တန်းကြစေလိုခြင်း" - Yangon Nation News
“အသိ သတိ များဖြင့် ရင်ဘောင်တန်းကြစေလိုခြင်း
ယခုမိမိမှရေးသားတင်ပြမူသည် မည်သူ့ကိုမျှ ထိပါးစေလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊
မည်သူ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ပုတ်ခတ် မူလည်းမဟုတ်ပါ၊
မိမိသည် နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများကို ရေးသားလာခဲ့ရာတွင် (၁၀) နှစ်နီးပါးခန့်ရှိပါပြီ၊
မိမိ၏ ဆောင်းပါးများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ပြီး ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေသူကို ထိပါး စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ် စော်ကား ရေးသားနေသူလည်းမဟုတ်ပါ၊
မိမိနိုင်ငံအတွက် မိမိလက်လှမ်းမှီသ၍ လေ့လာ ဖတ်မှတ် ကာ အစဉ်တစ်စိုက်ရေးသားနေသူသာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ ထာဝရရန်သူဆိုတာမရှိသလို –
သို့ပေမယ်လို့တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူ ပြည်သားများအတွက် ထာဝရ အကျိုး စီးပွားတော့ရှိဘို့ လိုပါတယ်။
အဘ ဒဂုံတာရာ ကတော့…..
မိမိတို့နိုင်ငံသားများကို သွန်သင် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယခု တစ်လော fb မှာတွေ့နေရတာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမုန်းအတေးများကို သက်တန်းရှည်စေနိုင်မည့် အပြောအဆို အရေးသားများကိုတွေ့နေရပါတယ်။
အသက်အရွယ် ငယ်နုစဉ် ကျောင်းသားဘဝမှာ အတွေ့အကြုံမရှိ၊ ကြမ်းတမ်းသော ၊ခက်ခဲသော၊ အသက်အန္တရာယ်များသော၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ် ခံယူကြကာ ကိုယ်နိုင်သ၍ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့ကြ ပြီး ယခုအချိန်ကာလမှာ မင်းကဘာ၊ ငါကဘာ စသည်ဖြစ် အပြစ်အနာ အဆာ များကို တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပြစ်ပြစ် နှစ်နှစ် ရေးသား နေကြသည်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်ကို အရှက်ရစေပြီး ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာ ဖြစ်ကြရပါတယ်။
မိမိတို့ထက် ကြီးသူများ၊ မိမိတို့ထက် ငယ်ရွယ်သူများအားလုံးကို အားနာကြဖို့ မကောင်းဘူးလား ?
မိမိတို့ (၈၈) တွေဟာ (၈၈၈၈) ကာလမှာ တောထဲကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်မှသာအာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချ နိုင်မှာဟူသည့် သဘောထား ခံယူချက်များကို ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများဆီသို့ သွားကြပါတယ်၊ မည်သူ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထား စည်းရုံး ခိုင်းစေမူများမဟုတ်ပါဘဲ မိမိတို့ ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့ သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဆီရောက်လာကြသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ အလယ်တန်း၊အထက်တန်းကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၊ လုပ်သားကောလိပ်၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ အရပ်ရပ်သော လူထု လူတန်းစားပေါင်းစုံမှ လူငယ်၊လူရွယ်၊လူလတ်များအပြင် သံဃာတော်များပါမကျန် အမျိုး အမယ်စုံ လာရောက် ကြသူ အားလုံးကို လိူက်လှဲ ပျူငှာစွာဖြင့် ကျွေးမွေး လက်တွဲဖေါ်များအဖြစ် ရပ်တည် ကူညီပေးခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အင်အားစု အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်အလေးထားပါတယ်။
ထိုစဉ်အခါတုန်းက မိမိတို့အားလုံးသည် ကျောင်းသားတွေသာဖြစ်ကြပြီး အသက်အရွယ်အားဖြင့် (၂၀) ကျော်များသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းကို မိမိတို့ဘာသာ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထူထောင်ခဲ့ကြတာကို မမေ့စေခြင်ပါ၊
သို့ပေမယ်လို့ မိမိတို့ဟာ ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသလို မိမိတို့တစ်ဦးခြင်းကလည်း ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်းရှိေ နကြပါတယ်၊ ဒါကိုတော့ သိထားကြစေလိုပါတယ်၊
ပြည်တွင်းပြန်လာကြတဲ့သူတွေရှိသလို၊တောထဲမှာ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဆက်ဝင်နေကြသူများသည်လည်းရှိနေခဲ့ကြပြီး၊ တတိယနိုင်ငံများဆီသို့ သွားကြသူများလည်းရှိခဲ့ကြရပါတယ်၊
သို့ပေမယ်လို့ မိမိတို့အားလုံးက အာဏာရှင်စံနစ်ကို လက်မခံသလို အာဏာရှင်နဲ့လည်းပူးပေါင်းမူ မလုပ်ခဲ့ကြတာကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက အသိအမှတ်ပြု ထားကြတာကိုယနေ့အထိ တွေ့နေကြရ ဆဲပါ။
ယနေ့အချိန်အထိ မိမိတို့တစ်တွေဟာ ရောက်သည့်နေရာ ဒေသတိုင်းမှာ ကိုယ်တစ်ဦးခြင်း သော်လည်းကောင်း၊အစုအဖွဲ့ အဖြစ်နဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ယုံကြည်သည့်
နိုင်ငဲံခါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်နေသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ကိုယ့်အရွယ်တန်း မျိုးဆက်ပါတီများနဲ့သော်လည်းကောင်း ၊မိမိတို့နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး အခြေခံ ကောင်းများဖြစ်တည်လာစေရန် သက်ဆိုင်ရာ အသီးသီးမှာ တိုင်းပြည်၏ တာဝန်ကို ထမ်းရွက်နေ ကြတာကို တွေ့ မြင် သိနေကြပါတယ်။
ဤ့ အပြင် မိမိတို့၏ လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက် ရဲဘော်ဟောင်းများ၏ လိုအပ်နေသော လူမူ ကျန်းမာရေးများကိုလည်း တတိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြသည့် ရဲဘော်ဟောင်းများနှင့်
ပြည်တွင်း၌ ရှိနေကြပါသော ရဲဘော်ဟောင်းများဟာ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသည်မှာ နှစ်ကာလကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာဘဲဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ကြပါစေ၊ ယခုအချိန်မှာ အချင်းချင်း တတ်နိုင်သ၍ ကူညီဖေးမနေကြပါတယ်။
အားလုံးသည် (၈၈၈၈) လူထုတော်လှန်ရေး အုံကြွမူ တိုင်းမှာ တစ်ဦးခြင်း၊တစ်ဦးခြင်း မှ ကိုယ်စွမ်းသ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြတာချည့်ပါဘဲ။
မိမိတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝက စိတ်ကူးမူတစ်ခုရှိခဲ့ ကြပါတယ်၊
အကယ်၍ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စံနစ် ပြောက်သွားပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ထွန်းလာရင်၊ အနိုင်ရပါတီက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ အမတ်ဦးရေနည်းတဲ့ပါတီတွေက အစိုးရကကောင်းတာလုပ်နေရင် ဖေးမကူညီအားဖြည့်မယ်၊
တိုင်းပြည်အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေများလာရင် အစိုးရကို လွှတ်တော်ထဲမှာ တရားဝင် အတိုက်ခံလုပ်မယ်၊ထိန်းညှိကြမယ်။
ငါတို့ဟာ လူ့ဘဝစတင်ရောက်ရှိလာကထဲက သိလိုက်ရတာက နိုင်ငံရေးက အပေါ်မှာသပ်သပ်၊ ငါတို့ ပြည်သူတွေက အောက်မှာသပ်သပ်နေပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ ငါတို့ ပြည်သူတွေက ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးက အန္တရာယ်ကောင် ကြီးဖြစ်လို့နေပါလား ? နိုင်ငံရေးက ငါတို့ပြည်သူအားလုံးအတွက် ကြောက်စရာကြီးပါလားလို့ ထိတွေ့ မြင်ခဲ့ ခံခဲ့ကြရပါတယ်။
၎င်းဖြစ်စဉ်ကြီးကို မင်းတို့ ငါတို့အားလုံးက စာတွေဖတ်ပြီး သိခဲ့ ကြတာက ဘာလဲ
ဆိုတော့ ဒို့နိုင်ငံက လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကထဲက အကွဲ အပြဲ တွေနဲ့ အချင်း ချင်းရန်ဖြစ်လာလိုက်ကြတာ
ကွန်မြူနစ်နဲ့ ဖဆပလ ကွဲ၊ တစ်ခါ ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲ၊ ဦး၊ဗိုလ်၊သခင် ကွဲ၊ စသည်ဖြစ် ပေါ့ ၊
တိုင်းရင်သားအရေးတွေဖြစ်တဲ့ တန်းတူရည်တူမူ နဲ့ နိုင်ငံရေးညီညွတ်မူတွေ ကျဆုံးလာခဲ့ရတယ်၊
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမရှိတော့ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့တာကို သုံးသပ်ရပါတယ်)၊
လွတ်လပ်ရေးရပြီးကထဲက အကွဲအပြဲ ဟာ မင်းတို့ငါတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာ ဒို့နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားရတာဘဲအဖတ်တင်တော့တယ်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ခေတ်မှာ အရင်က အကွဲ အပြဲ တွေကို ဆက်ပြီး အဓွန့် မရှည်ရစေပါဘဲ ပြသနာကြီးများကင်းရှင်းစေတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေရမယ်၊
လွတ်လပ်တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကနေ ပြည်သူတစ်ဦးခြင်းက လွတ်လပ်တဲ့ ဆုံးဖြတ် မဲဆန္ဒပေးမူနဲ့ တက်လာတဲ့ ရွေးချယ်ခံအစိုးရများက ရွေးကောက်ပွဲသက်တန်း တစ်ခုပြည့်သည့်အခါတိုင်း မှာ ဖြစ်လာစေရမယ်၊
ပြည်သူကြိုက်ပါက ပြန်အရွေးချယ်ခံအစိုးရ ဆက်ဖြစ်စေရမယ်၊
နိုင်ငံသားတိုင်းက စံညွန်းနဲ့ညီပါက နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ခွင့်နဲ့ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်များရှိလာစေရမယ်၊
နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးဟာ ဒို့ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်ထပ်ထဲရှိနေစေရမယ်။
ဒို့နိုင်ငံနဲ့ ဒို့နိုင်ငံရေးကို ချစ်ခင် မြတ်နိူး စုံမက်စေရမယ်။
ဒို့နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအလယ်မှာ ထည်ဝါနေစေရမယ်။
မင်းတို့ ငါတို့ ဟာ အားလုံး မင်းတို့ ငါတို့ကို မွေးဖွား သန့်စင်ပေးလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ပေဘူးလား ?
ငါတို့ဟာ အရွယ်ရောက်လာကြပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးတွေကိုသိလာကြတဲ့အခါမှာ ဒို့နိုင်ငံမှာ
ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ အကွဲ အပြဲကို တိုင်းပြည်နဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ချစ်ဲကြတဲ့ ဒို့တစ်တွေ ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရလဲ ?
အဲလိုဘဲ ဒို့နောက်က လိုက်လာကြတဲ့ နိုင်ငံ့ သားကောင်း သမီးကောင်းတွေကို ဒို့လို မခံစားကြရပါစေနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့…..
မိမိတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် စုစည်း ပေါင်းစုကြကာ စုပေါင်းအင်အားများဖြင့်……
ပြန်လည် ပြုပြင် တည်ဆောက် ထူထောင်လိုက်ကြပါစို့………. !